कांग्रेसमा देउवाका तीन वर्ष : जसभन्दा अपजस बढी, संगठनमा पकड, जनमतमा कमजोर - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
कांग्रेसमा देउवाका तीन वर्ष : जसभन्दा अपजस बढी, संगठनमा पकड, जनमतमा कमजोर
प्रकाशित मिति: १९ चैत्र २०७५, मंगलवार April 2, 2019
काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा ०४६ सालपछिको नेपाली राजनीतिका शक्तिशाली खेलाडी हुन् । उनी चारपटक प्रधानमन्त्री भइसके । कांग्रेस विभाजनमा एक हिस्साको नेतृत्व गर्दै कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)को सभापति भए । सात दशक पुरानो कांग्रेस इतिहासमा उनको शक्तिशाली मोडचाहिँ १३औँ महाधिवेशन थियो, जसमा उनी एकीकृत पार्टीको सभापति चुनिए । कोइराला विरासत तोडेर सभापति हुने सौभाग्य पाएका देउवाले त्यसयता तीन वर्ष गुजारिसकेका छन् । यो तीन वर्षको जस–अपजस मुख्य नेतृत्वका हिसाबले उनकै काँधमा छ । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
तीन वर्षअघि चैतमा उनले सभापतिमा रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेका थिए । अर्का प्रत्याशी कृष्णप्रसाद सिटौला भने पहिलो राउन्डबाटै बाहिरिए । त्यसयता अन्तरपार्टी खिचातानीमा देउवा पार्टी केन्द्र र संसदीय दलमा बहुमतसहित बलिया देखिन्छन् । तर, उनकै नेतृत्वमा भएको निर्वाचन परिणाममा कांग्रेस इतिहासमै कमजोर देखियो । पार्टीलाई विधान र पद्धतिमा हिँडाउन नसकेको आलोचनाको स्वर बढ्दै गयो । शीर्ष नेता नै निर्वाचनमा पराजित हुनुपरेपछि, संघदेखि प्रदेशसम्म बलियो प्रतिपक्षीसमेत बन्न सकेन । जसका कारण देउवाविरुद्ध पूर्वसंस्थापन एक भएर अघि बढ्न खोज्दैछन् ।
निर्वाचनले जस, नतिजाले अपजस
देउवाकै नेतृत्वमा बाँकी रहेका स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन भयो । निर्वाचन गराएको जस त देउवालाई गयो तर तीनवटै निर्वाचनमा कांग्रेसका पक्षमा कमजोर नतिजा आयो । संघमा र सातवटै प्रदेशमा कांग्रेस सरकारबाहिर पुग्यो, कमजोर प्रतिपक्ष बनेर । यसमा देउवाले टिकट वितरणदेखि नै त्रुटि गरेको आरोप भोग्नुपर्‍यो । समीक्षामा भने कम्युनिस्ट मिलेका कारण पराजय भोगेको निष्कर्ष निकालियो ।
तीन वर्षमा के–के गरे ?
सभापति भएको दुई महिनामा पदाधिकारी चयन, विभाग गठनसहित पार्टीका सबै संरचना पूरा गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । पदाधिकारी चयन गर्न देउवालाई दुई वर्ष बढी लाग्यो । उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा डा। प्रकाशशरण महतलाई देउवाले २६ महिना लगाउँदै २०७५ वैशाख २१ मा मनोनित गरे । २१ केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्नुपर्नेमा चार–पाँचपटकमा २० जना मनोनित गरे । अझै दलित कोटाबाट एक केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएको छैन । कार्यकाल दुई वर्ष पुग्दा देउवाले चार केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न बाँकी थियो । यो वर्ष तीन मनोनित गरे ।
के गर्न सकेनन् ?
सभापतिमा चुनिएलगत्तै नेविसंघ, महिला संघ र तरुण दलको महाधिवेशन गराएर देउवाले आशाको सञ्चार गराए । तर, नेविसंघमा पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समिति बने पनि गुटगत विवादले दुईवर्षे अवधि थप गरिएको ६ महिने अवधिमा यो संगठन विवादमुक्त हुन सकेन । बरु अध्यक्ष नैनसिंह महरले समयमा महाधिवेशन गराउन नसकेपछि दुई महिनाअघि राजीनामा दिए । तर, नेविसंघ तदर्थ समिति बन्न सकेको छैन । तरुण दलमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महसचिव बने । पूर्ण कार्यसमिति बन्न सकेको छैन । महिला संघ पनि पूर्ण हुन सकिरहेको छैन ।